Kunamata Kwekunatsa Minyengetero | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Kunamata Kuchenesa Minamato
Kucheneswa pamweya imhando yekununurwa kunofanirwa kuitika muhupenyu hwemunhu kana mutendi kuti munhu iyeye asununguke zvachose kubva mukutambudzwa nadhiyabhori. The Ropa raJesu ndiye washer yakakwana inozotinatsa kubva kune imwe michero yakaipa yakaiswa mukati medu nemuvengi. Nguva zhinji, avo vanonyatsoda kucheneswa pamweya varume nevarume vakadzi vachiri kunetseka nekutenda.
Ivo havana murume anonzi Mweya Wakachena mukati mavo, saka, vari kugarwa nedhimoni. Zvakare, kutonga nezvakaipa izvo zvinogara munyika yatinogara mairi mweya yemadhimoni emadzitateguru ayo anokanganisa vanhu vanobva kurudzi rwakati kana hwemhuri. Nhasi tichave tichiita minamato yekuchenesa pamweya. Iyi minamato ichakubatsira iwe kubata nezvose matambudziko ekutanga muhupenyu hwako.
Matambudziko mazhinji muhupenyu hwevanhu vazhinji nhasi anoteedzerwa kune midzi, ikoko kwemadzitateguru. Zvinoda kucheneswa pamweya kuti uve wakasununguka kubva kumatambudziko akadai.
Zvakakosha kuziva kuti iyi mhando yekucheneswa pamweya haisi iyo inoitwa nemunhu nekuenda kunogeza kana kugeza kubva kurukova rwuri kuyerera. Bhaibheri rinoti iropa rinotaura zvakarurama kupfuura ropa ra Aberi rakadeurwa isu. Kunyangwe tichiri vatadzi, Kristu akatifira, iro ropa rake rakaurayiwa kubva pakuvambwa kwenyika.
Mukukosha, avo vachiri kugamuchira munyaradzi anova iwoMweya Mutsvene vanogona kuve neadhiyabhorosi iyo ichaita kuti vade kucheneswa pamweya.
Nekudaro, semuChristu wechokwadi, hazvigoneke kuve wakazara nadhiyabhori kana mweya wakaipa nekuda kweMweya Mutsvene unogara mukati memutendi wechokwadi. Kuvapo kweMweya Mutsvene kwakaita sechiedza chinopenya murima rehupenyu. Nekudaro, Mukristu anogona kushungurudzwa uye kudziviswa nadhiyabhori. Dhiabhori achinyatsoziva kuti harigone kugara kana kugara muhupenyu hwevatendi vechokwadi vanogona kusarudza kuendesa kutambudzika kuchidzvinyirira mutendi akadaro.
Ndokusaka vatendi vazhinji kana ma Kristu nhasi varikutambura nehurombo, kurwara, kushungurudzika, kunonoka kwewanano, kufa kusingafungidzirwe, kusagadzikana nezvimwe zvakawanda. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yekuchenesa pamweya nhasi, unofanirwa kusunungurwa
Nguva zhinji, tinogona kudzvanywa nadhiabhori uye hatizive kusvikira tasvika pakuziva kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvimwe zvezviratidzo zveudzvinyiriri muhupenyu hwemutendi; Kurwara, Hasha, Kutya, Chikwereti, kutadza kuramba zvivi uye zvimwe zvakawanda.
Kunyangwe wagamuchira chipo cheMweya Mutsvene kana kwete, kunyangwe uchigara uine kana kushungurudzwa naDhiabhori mese munoda munamato wekucheneswa pamweya uko kunobvisa zvakaipa zvese, hutera uye humwe uipi hwadhiyabhorosi kuti akubate nhapwa semutendi.
Chero nguva iwe yaunoona zvimwe zvinhu zvinoshamisa pamusoro pako, kana iwe ukaona kuti unoita zvinhu zvisina kutevedzera zvemweya, kana zvinhu zvikaitika kwauri izvo zvisingamiriri mifungo iyo Mwari anayo kwauri, zvakakosha kuti iwe unotaura iyi minamato yekunatswa kwekunamata.
• Ishe Jesu, ndinoreurura zvivi zvangu nokuzvininipisa. Pamberi pako newe chete ini ndakatadza uye ndakaita zvakaipa pamberi pako, Ishe ndinokumbira kuti muregerere zvivi zvangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ini ndinozvibvisa pane zvese zvirevo zvemadzitateguru zvinoshanda zvinopesana nehupenyu hwangu uye hunhu muzita raJesu.
• Simba rega nehumambo zvinonditambudza nekushungurudza masimba angu zvinopedzwa muzita raJesu.
• Ishe Jesu, ini ndinorega basa rose radhiabhori. Bhaibheri rinoti pikisa dhiabhori uye richatiza, ini ndinoramba basa rega radhiabhori muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Ini ndinoti kucheneswa kwangu kwemweya nemasimba edenga. Ini ndinozvinatsa pse kubva pasimba rega nehushe uye zvibvumirano zvinoshanda zvinopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
• Ini ndinotema kuti neropa raKristu, ndinoparadza kutuka kese kunoshanda kwandiri. Bhaibheri rinoti kuna Kristu akaitwa kutukwa isu nekuti anotukwa ndiye akasungirirwa pamuti. Ini ndinozivisa kusununguka kwangu kubva pakutukwa kwemutemo muzita raJesu.
• Ishe Jesu, ndinotyora joko rega rerima pahupenyu hwangu. Chero yedhimoni roga roga rakashandiswa kundisunga pane rakaputswa muzita raJesu.
• Ishe Jesu, ndinopa Kristu mukana usingaverengeki wehupenyu hwangu. Ini ndinosimbisa nzvimbo dzese uye gomba rega roga iro dhiabhori angave nahwo muhupenyu hwangu muzita raJesu.
• Kubva zvino zvichienda mberi, ndinotanga kufamba muchiedza chaKristu. Ini ndinosimudzira kuti nesimba riri muzita raJesu ndinoburitsa mwenje waKristu muhupenyu hwangu, handichazombofambi murima muzita raJesu.
• Ishe Jesu, ini ndinotema chirevo kuti muzita raJesu ndinoshongedza nhumbi dzose dzokurwa nadzo nezita raJesu.
• Ishe Mwari, Bhaibheri rinoti nekuzodza joko rese rinofanira kuparadzwa. Ini ndinotyora joko roga roga radhiabhori muhupenyu hwangu muzita raJesu
• Bhaibheri rinoti takagara munzvimbo dzekudenga dzakakwirira kupfuura masimba nehumambo. Ini ndinotora kusvinura kwemweya nemvumo yekugara munzvimbo dzedenga muzita raJesu.
• Ndinozvisimudzira pamusoro pehusimba hwese uye hukuru, kurwisa vatongi verima, ndinotema simba rangu rehumambo muzita raJesu.
• Ndinodzinga simba raSatani nemadhimoni ake muzita raJesu.
• Rugwaro runoti ndishambidze uye ndichageza uye ndichave akachena kupfuura, ndinozvinatsa neropa rako rinokosha uye ndinoreurura hutsva hwangu hwakapenya senyeredzi dzamangwanani muzita raJesu.
• Ini ndinotema kusununguka kwangu kubva kumweya yemugungwa yega yega inondiita kuti ndive nedambudziko remuchato muzita raJesu.
• Rugwaro runoti iye mwanakomana akasunungurwa wakasununguka zvechokwadi, ndinosheedzera kusununguka kwangu pasimba rehuranda muzita raJesu.
• Baba Ishe, ndinokumbira kuti muchagadzira mandiri moyo wakachena uye muvandudze mweya wakanaka mukati medzita raJesu.
• Ndinonamatira simba nenyasha kuti kubva zvino handichazoenderana nenyika nemuzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yekukunda Mumatare edzimhosva
inoteveraMinamato Yeiyo Pfungwa dzakavhiringidzika